ပြင်သစ်နိုင်ငံ Charlie Hebdo ဂျာနယ်ရဲ. မိုဟာမက်ကိုလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ကာတွန်း ~ Myanmar Forward
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Charlie Hebdo ဂျာနယ်ရဲ. မိုဟာမက်ကိုလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ကာတွန်း
သူ့ပုံစံက အမေရိကန်ဗွီဒီယိုကြောင့် ယမ်းမီးပုံကျဒေါသအိုးပေါက်ကွဲနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို လှောင် ပြောင်နေတဲ့ပုံ။Anti-Islam film ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန် မွတ်ဆလင်လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲကို ပြင် သစ်ကပါ ကာတွန်းဆွဲပြီး ၀င်လာပါပြီ။
ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာနဲ့သတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အိန္ဒိယက အာသံအရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကြိုးဝိုင်းထဲဝင်လာပါတယ်။
နောက်တော့ အမေရိကန်က ဗွီဒီယိုကိစ္စ၊ ပြင်သစ်က ကာတွန်းကိစ္စနဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲကိုဝင်လာပါပြီ။
ပွဲစကာ စမှာ မြန်မာကို တစ်ယောက်နဲ့ အများ ၀ိုင်းနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေကြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေခုတော့ ဟို ဘက်ပြေးရန်ဖြစ်လိုက် ဒီဘက်ပြေးရန်ဖြစ်လိုက် အရူးမီးဝိုင်းသလို ဖြစ်နေတော့မှာကို မြင်ယောင် နေမိတယ်။
ပြဿနာအားလုံးဟာ ဘင်္ဂါလီအမျိုးမွတ်ဆလင်တွေရဲ့ လူပါးဝမှု၊ အရာရာ ကိုအကြမ်းဖက် ပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့သာဖြေရှင်းလိုမှုကြောင့်သာဖြစ်လာတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲ နောင်တစ်ချိ်န်မှာ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာနဲ့ တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီး ကုလားနဲ့ ငါးအရုပ် ရေးပြရမဲ့အချိန်ကို ရောက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။